अनुमतिबिना स्वास्थ्यकर्मीको गाडी रोकेर दुर्व्यवहार गर्ने पक्राउ | PBM News.com
काठमाडौं ४ जेठ । सामाजिक संजालमा हिजो एउटा भिडियो एकाएक भाइरल भयो । उपत्यका छिर्ने नागढुंगा नाकामा स्वास्थ्यकर्मीको गाडी रोकेर अख्तियारकै शैलीमा अनुगमन गरेको भिडियो खुब भाइरल भयो । भाइरल भिडियोमा आम दर्शक स्रोताले स्वयमसेवकको रुपमा खटिएको भनिएकाहरुलाई गाली गरेको प्रतिकृया मात्रै आएपछि उनीहरुलाई तनाव भयो । बेलुकी उत्तम कार्मी फेसबुकमा एकाएक लाइभ आएर आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेर । यसरी व्यक्तिको मानमर्दन गरेको विषयले अहिले पनि चर्चा पाइरहेको छ ।
उपत्यका प्रवेश गर्ने एक प्रमुख नाका नागढुंगामा खटिएका युवा स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चन्द्रागिरिका उत्तम कार्की छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले उनलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन् । कार्कीविरूद्ध अभद्र व्यवहारको कसूरसम्बन्धी अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि खटिएको भन्दै शुक्रबार दिउँसो उनीलगायतले वागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. नारायण कार्कीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए । उनीहरुले प्रहरीकै अगाडि कार्कीको खानतलासी पनि लिएका थिए । जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । उनीरुसँग परिचय पत्र समेत नभएको खुलेको छ । सद्भाव नेपालका अध्यक्ष भन्ने अभिषेक श्रेष्ठ, उत्तम कार्की, दीपकराज रेग्मीसहित ७ /८ जनाले प्रदेश नं. ३ का जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक नारायण कार्कीको गाडी अनुगमन गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा उनीहरूले गाडीमा सवार कार्कीलाई झोला खोल्न लगाएका थिए । अनुगमन गर्ने युवा कसैसँग पनि आधिकारीक परिचयपत्र नभएकाले उनीहरूलाई पक्राउको तयारी गरिएको छ ।
कालिकालाई हरियाली नगर बनाउने अभियान तीब्र / सेनाको व्यारेक भित्र वृक्षारोपण गरियो